I-Aged Shelf Company, Inhlangano Yezimali Nezinkampani Zakwa-LLC Zokuvuselela Izimali
Imali yokuvuselelwa kwezinkampani ezindala, ama-LLC, nezinye izinhlobo zenkampani.
Unyaka nonyaka inkampani, i-LLC noma uhlobo lwenkampani olufanayo luzothola imali yokuvuselela yonyaka. Izimali eziningi zenkampani yaseMelika zenziwa ngosuku lokugcina lwenyanga lapho le nkampani yaqala ukufakwa khona. Isibonelo, ake sithi inkampani yafakwa enkantolo eNevada ngoMashi 15. Imali yokuvuselela yonyaka isikhokhisa ngoMashi 31 yonyaka ngamunye. Uma imali yokuvuselela ingakhokhelwa ngosuku olubekiwe uhulumeni uhlola inhlawulo. Amazwe ahlukene kanye namazwe ahlukahlukene ngokuhlukahluka kuhlelo lokuvuselela nenani elifanele.
Isibonelo, ezweni laseBelize, kungakhathalekile usuku lokufakwa, imali yesondlo yeminyaka yonke idingeka ngo-Ephreli 30th wonyaka olandelayo. E-Anguilla, imali yokuvuselela ibhalwe kusheduli yekota.
Okulandelayo yisibonelo sohlelo lokuvuselela i-Anguilla:
Izimali zokuvuselelwa kwenkampani ye-Anguilla zibangelwa i-schedule ngokuya ngezinsuku zokufakwa kwazo. Ngaphansi koMthetho we-IBC, imali yokuvuselela yonyaka ayikhokhwa ngaphambi kosuku lokugcina lwekhalenda lapho i-IBC yafakwa khona ekuqaleni. Ngakho-ke, uma inkampani ibifakiwe kwi-1st kaSepthemba, inkampani iyadingeka ukuthi ikhokhe imali yayo yokuvuselela unyaka nonyaka kungakadluli i-30th kaSepthemba ngonyaka olandelayo.
Usuku lokugcina lekota ngayinye yile: Mashi 31st, Juni 30th; Septhemba 30th; nangoDisemba 31st.
Imali yelayisensi isethwe kanjena:
I- $ 750 - uma inhlokodolobha egunyaziwe ingeqi i- $ 50,000.00 futhi wonke amasheya enkampani anenani le-par;
Uhulumeni ungeza ukwanda kwamanye amacala alandelayo, uma:
- Imali egunyaziwe ingaphansi kwe- $ 50,000, kepha amanye noma wonke amasheya awanalo inani le-par;
- Inkampani ayinayo imali egunyaziwe futhi wonke amasheya awasizi ngalutho
- Inhlokodolobha yayo egunyaziwe idlula $ 50,000.00;
Izimali Ezibhaliselwe Umenzeli
Ama-ejensi abhalisiwe e-Anguilla anezimali zawo ezibekiwe zokubamba i-ejenti ebhalisiwe yenkampani nokunikeza ihhovisi elibhalisiwe.
Ngokuya ngezinsizakalo ezinikeziwe (abaqondisi / izikhulu / abaninimasheya), imali ingahluka.
Imali Yokudlulisa Imeyili
Kungenzeka futhi ukuthi ucele izinsizakalo ezingeziwe, njengokudlulisela imeyili, okuzoletha imali ekhokhwa njalo ngenyanga noma yonyaka.
I-IBC ehluleka ukukhokha imali yonyaka ngosuku okufanele ifike ngalo ithola inhlawulo ye-10% ezimalini zikahulumeni. Ngakho-ke, lapho imali kahulumeni eyi- $ 200.00, lokhu kuzoba yi- $ 20.00.
Uma izinyanga ezithile ze-3 zidlula, isb. Ukukhokhwa bekufanele kwenziwe nge-30th kaJuni, ku-1st kaJulayi inhlawulo ye-10% yatholakala, kepha nge-30th kaSepthemba imali kahulumeni nesigwebo asikakhokhwa, bese kuba nenhlawulo. imali izokhuphuka ifike ku-50%. Le nkampani inezinyanga ze-3 yokwenza lokhu kukhokha, ngaphambi kokuba ihlatshwe.
Ngakho-ke, ukuqhubeka nesibonelo, uma isikhumbuzo senkampani singuMeyi, imali yokuvuselela yonyaka ibangelwa yi-30th kaJuni. Ku-1st kaJulayi inhlawulo ye-10% itholwe. Lokhu kusebenza kuze kube 30th kaSeptemba. Ngomhla ka-1st ka-Okthoba, uma imali nezimali zikahulumeni zingakakhokhwa, inhlawulo izonyukela ku-50%. Le nhlawulo isebenza kuze kube yi-31st kaDisemba.
Izinkampani ezingakakhokhi imali yazo kahulumeni kanye nezinhlawulo ezichazwe ngenhla, zizophulwa irejista nguhulumeni.
Izinsuku ezifanele yilezi ezilandelayo:
Izinyanga eziyi-Quarter Usuku lokugcina 10% Ukujeziswa Kwenhlawulo Ye-50% Ukujeziswa Kwenhlawulo Kwehlisiwe
I-1st Jan - Mar Mashi 30th Ephreli 1st Julayi 1st Okthoba 1st
I-2nd Apr - Jun Juni 30th Julayi 1st Okthoba 1st Janawari 1st
I-3rd Julayi - Sep Sep 30th Okthoba 1st Januwari 1st Ephreli 1st
I-4th Oct - Dec Dec 31st Januwari 1st Ephreli 1st Julayi 1st
Uma inkampani ibuyiselwa kungakapheli izinyanga ze-6 kusuku okuqhutshwe ngalo, imali yokubuyiselwa kuhulumeni yi- $ 300.00.
Uma inkampani ibuyiselwa ngaphezu kwezinyanga ze-6 ngemuva kosuku okushaywe ngalo, kuyakhokhwa imali yokubuyisa engu- $ 600.00.
Kwa-Anguilla imali ekhokhwayo ye-ejenti kahulumeni kufanele kulindeleke ukuthi ibe cishe yi- $ 750 ngonyaka.
Ngokufingqa, iningi lezinkampani zivuselela unyaka nonyaka imali kahulumeni ne-ejenti. Kungumsebenzi wabanikazi, amalungu, izikhulu, abaqondisi, abaphathi kanye nabalingani jikelele ukuthi bazi izidingo zokuvuselelwa ukuze inkampani iqhubeke nokuma okuhle.